Nwere ike ugbu a idobere Samsung Gear S3 na Spain | Akụkọ akụrụngwa
Nwere ike idozi Samsung Gear S3 na Spain
Samsung nọ na-akụ nzọ na smartwatches ya maka Tizen ruo oge ụfọdụ, sistemụ na-enye nnwere onwe ka ukwuu n’adịghị ka Android Wear na mgbakwunye ịkwụsị ịdabere na Google na ihe ndị na-arịwanye elu nke ụmụ okorobịa si Mountain View, maka enweghị oke ike ọ na-enye ndị nrụpụta na ndị mmepe. Ihe ngosi Samsung kachasị ọhụrụ, Gear S3, dị ka onye bu ya ụzọ, bụ ngwaọrụ nke na-eju anya maka atụmatụ ya na arụmọrụ ya. E debere ọgbọ nke atọ nke ihe nlereanya a na Spain ruo mgbe ọnwa Nọvemba 30 dị.
Gear S3 bịarutere n'ahịa Spanish ụbọchị ole na ole mgbe ọ malitere na South Korea, Australia, Dubai, France, United Kingdom, United States ... na anyị nwere ike ịchọta ya na nsụgharị abụọ dị iche iche: Gear S3 Frontier na Gear S3 Omuma. Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị ọrụ na-enweghị mmasị ịme ndoputa mana ọ nwere mmasị na ya, ị kwesịrị ịma Disemba 1 nke na-esote ọ ga-ere ahịa, ma site na webụsaịtị Samsung na site na ndị nkesa ikike dị iche iche.
Dị ka nkwalite mmalite Na Samsung online ụlọ ahịa si November 28 na December 15, ọrụ ga-enwe a € 50 onyinye iji na ha na-esote zụọ na a website. N'ime ndị ọzọ na-ere ahịa, ndị na-azụ ahịa ha ga-enweta discount 50 ego na nzụta Gear S3 ọ bụrụ na ha nyefee elekere ochie ha. Ha ga-enwe ike irite uru nke onyinye a site na Disemba 1 ruo 15.
Ọ bụ ezie na Gear S3 Frontier ka emepụtara maka mmụọ efu bụ ndị na-adị njikere mgbe niile maka njem, Gear S3 Classic na-enye anyị ngwaọrụ avant-garde nwere naanị aka aka nke ọkaibe nke ọtụtụ ndị ahịa na-achọ ma ọ bụrụ na ha etinye ego. Pricegwọ nke ọnụ abụọ, n'agbanyeghị ụdị na ngwụcha ha, ebe ha abụọ nwere otu nkọwa, bụ euro 399.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Nwere ike idozi Samsung Gear S3 na Spain
Nke a bụ echiche ZTE maka obere Nubia bezel-less
A 24-anụ ọhịa obere ihuenyo maka gị ama ma ọ bụ laptọọpụ